रक क्रिस्टल - सिलिकन डाइअक्साइडको एक खनिज - सूत्र SiO2- भिडियो
ट्याग क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, रक
शुद्ध क्वार्ट्जलाई परम्परागत रूपमा रक क्रिस्टल वा स्पष्ट क्वार्ट्ज भनिन्छ। रक क्रिस्टल क्वार्ट्ज geodes अर्थ र उपचार क्रिस्टल गुणहरू।
हाम्रो पसलमा प्राकृतिक रक क्रिस्टल क्वार्ट्ज किन्नुहोस्
शुद्ध क्वार्ट्जलाई परम्परागत रूपमा रक क्रिस्टल वा स्पष्ट क्वार्ट्ज भनिन्छ। यो रंगहीन र पारदर्शी छ।
रक क्रिस्टल सिलिकन डाइअक्साइडको खनिज हो। सूत्र सिओ २. सिलिका क्वार्ट्जको रूपमा क्रिस्टलाइज गर्दछ। पृथ्वीको क्रस्टको लगभग १%%। Rhombohedral क्रिस्टलीय क्वार्ट्जको परिवारबाट। यो ठूला, बेरंग क्रिस्टलको रूपमा छ। यसैले यो लिथोथेरापीको मास्टर पत्थर मध्ये एक हो।
हाइड्रोथर्मम प्रक्रिया द्वारा, दरारहरुमा सबैभन्दा सुन्दर क्वार्ट्ज क्रिस्टिज्ज। यो सिलिका मा अमीर चट्टानहरूको प्रक्षेपण। यसैले चट्टानको क्रिस्टलको नाम।
क्वार्ट्ज प्रायः अन्य खनिजहरूको साथ हुन्छ। feldspars (अल्बाइट, orthose, एडुलर) र क्याल्साइट। क्रिस्टलको सौन्दर्य कटौतीमा निर्भर गर्दछ। मुख्यतया हाइड्रोथर्मल समाधानको तापक्रमबाट। तिनीहरू जति उच्च हुन्छन्, त्यति नै सुन्दर र पारदर्शी हुनेछन्। तिनीहरू प्राय: जसो कुनै पनि तरीकाले समूहमा व्यवस्थित छन्। त्यसैले क्वार्ट्ज नक्कल chrysanthemums को क्रिस्टल को एक sheaf मा।
केही क्वार्ट्जले समाविष्ट रूपमा विभिन्न खनिजहरू समावेश गर्दछ। त्यहाँ सुर्तीको सुई, टूर्लमिन, एम्फिबिले, वा क्लोराइइट स्प्यानलहरू पनि छन्। केहि क्रिस्टलहरूको रंग तत्व तत्वहरूको उपस्थितिको कारण हो। फलाम अक्साइड जस्तै, म्यांगनीजियन वा अन्य खनिजहरू समावेश।
Takeo, कम्बोडिया देखि रक क्रिस्टल क्वार्ट्ज,
क्वार्ट्ज त्रिभुवन क्रिस्टल प्रणालीसँग सम्बन्धित छ। आदर्श क्रिस्टल आकार एक छ-पक्षीय प्रिज्म समाप्त हुन्छ। प्रत्येक अन्तमा छ-पक्षीय पिरामिड संग।
प्रकृति क्वार्ट्ज क्रिस्टलमा प्रायः दोहोर्याइन्छ। जुम्न दाहिने हात र बाँया हात क्वार्ट्ज क्रिस्टलको साथ पनि विकृत, वा बाधाग्रस्त। क्वार्ट्ज को आसन्न क्रिस्टल संग। वा अन्य खनिजहरू मात्र यो आकारको भाग देखाउँछन्। अथवा पूर्ण क्रिस्टल पूर्ण रूपमा अनुहारको कमी र ठूलो देखिन्छ।
यसबाहेक, राम्रोसँग बनेको क्रिस्टल सामान्यतया 'ओछ्यानमा' गठन हुन्छ र शून्यमा बढ्न बाध्य हुन्छ। सामान्यतया क्रिस्टलहरू अर्को छेउमा म्याट्रिक्समा संलग्न हुन्छन्। साथै एउटा मात्र टर्मिनेसन पिरामिड अवस्थित छ। जहाँसम्म, दुई पटक समाप्त हुने क्रिस्टलहरू हुन्छन् जहाँ तिनीहरू बिना संलग्न बिना नै स्वतन्त्र रूपमा विकास गर्छन्। जिप्सम भित्र उदाहरण को लागी। क्वार्ट्ज जियोड यस्तो अवस्था हो जहाँ शून्य आकारको लगभग गोलाकार हुन्छ। क्रिस्टलको बेडको साथ अ poin्कित इशारा गर्दै।
जिओड ब्यान्डि and र रoration्ग परिवर्तनशील अशुद्धिको परिणाम हो। फलामको अक्साइडले सिलिसियस समाधानहरूमा रस्ट रuesहरू प्रदान गर्दछ, जस्तै सामान्यतया अवलोकन गरिएको फलामको दाग क्वार्ट्ज। धेरै जसो जिओडमा स्पष्ट क्वार्ट्ज क्रिस्टल हुन्छ, जबकि अन्यमा बैजनी नीलम क्रिस्टल हुन्छ। अझै अरूसँग एगेट, चालेस्डनी, वा यास्पर ब्यान्डि or वा क्रिस्टलहरू हुन सक्छन् जस्तै क्याल्साइट, डोलोमाइट, सेलेस्टाइट, इत्यादि। जिओडको भित्री भाग के हो भनेर बताउने कुनै सजिलो तरीका छैन जबसम्म यो खुला वा काटिएको हुँदैन। जे होस्, कुनै विशेष क्षेत्रका जियोडहरू प्राय: समान देखिन्छन्।
जिओडहरू र जियड स्लाइसहरू कहिलेकाँही कृत्रिम र with्गले रंगिन्छन्। असामान्य र colors्गहरू वा अत्यधिक सम्भावित ढाँचा भएका जियोडहरूका नमूनाहरू प्राय: कृत्रिम रूपमा परिवर्तन गरिएका छन्।
रक क्रिस्टल क्वार्ट्जको अर्थ र उपचार क्रिस्टल गुणहरू
रक क्रिस्टल क्वार्ट्जको अर्थ र उपचार क्रिस्टल गुणहरू। एक शक्ति ढु stone्गा जुन एक उपचार ढु stone्गा को रूप मा मूल्यवान छ। यसलाई खनिज राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली हिलि stone्ग स्टोनको रूपमा चिनिन्छ, कुनै पनि सर्तमा काम गर्न सक्षम छ। यसको धेरै प्रयोगहरूको कारण यसलाई "युनिभर्सल क्रिस्टल" भनिन्छ र यो प्रकट, उपचार, ध्यान, सुरक्षा र च्यानल गर्नको लागि लाभदायक छ।
क्वार्ट्ज क्रिस्टल कस्तो प्रकारको चट्टान हो?
क्वार्ट्ज पृथ्वीको क्रस्टमा सबैभन्दा सामान्य खनिजहरू मध्ये एक हो। खनिज नामको रूपमा, क्वार्ट्जले निर्दिष्ट रासायनिक यौगिक (सिलिकन डाइअक्साइड, वा सिलिका, SiO2) लाई जनाउँछ, जसमा विशिष्ट क्रिस्टल स्वरूप (हेक्सागोनल) हुन्छ। यो फेला पर्दछ कि रकका सबै रूपहरू हुन्: इग्निस, मेटामोर्फिक र तलछट।
रक क्रिस्टल र स्पष्ट क्वार्ट्ज बीच के फरक छ?
क्वार्ट्ज ढु stone्गाको परिवार हो। रक क्रिस्टल क्वार्ट्जको रंगहीन विविधता हो। रक क्रिस्टलमा यसको रंगलाई असर गर्न पर्याप्त ट्रेस खनिजहरू समावेश गर्दैन, त्यसैले यो स्पष्ट देखिन्छ।
क्वार्ट्ज रक के लायक छ?
क्वार्ट्ज अधिक मूल्यवान छ जब यो पूर्ण अक्षुण्ण छ; यद्यपि, स्वाभाविक रूपमा हुने असामान्य र of्गको क्वार्ट्जको एउटा टुक्रा अझै क्वार्ट्ज नक्कल गर्न डिजाइन गरिएको निर्मित प्लास्टिक वा गिलासको चिल्लो टुक्रा भन्दा बढी र उच्च गुणको मूल्यवान छ।
तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ कि चट्टान क्वार्ट्ज हो?
एक गिलास चमक कठोरता the Mohs स्केल मा, साधारण गिलास र सबै प्रकारको इस्पात कोत्र। यो समतल-फेस क्लीभेज टुक्राहरूको भन्दा ब .्गिएको घुमावहरूमा टुक्रिन्छ, यसको मतलब यसले कन्खोइडल फ्रैक्चर प्रदर्शन गर्दछ। लगभग सधैं सफा वा सेतो।
के रक क्रिस्टल दुर्लभ छ?
यो फेला पार्नको लागि सब भन्दा सजिलो ढु stone्गा मध्ये एक हो। यो विश्वका लगभग सबै देशहरूमा उपलब्ध छ, उदाहरणका लागि ज्वालामुखी टापुको रूपमा नयाँ सिर्जना गरिएका भूमिहरू बाहेक।
रक क्रिस्टल केको लागि राम्रो हो?
यसको शरीरमा यसको प्रभावहरू: रक क्रिस्टलले सुखदायक, शुद्धीकरण र धमनीहरू र रक्तवाहिनहरूमा हिलिंग प्रभाव पार्छ। यसले स्नायु प्रणालीलाई सहज पार्छ, जबकि हृदय प्रणालीलाई स्थिर गर्दछ।
तपाईं क्वार्ट्ज क्रिस्टलको साथ के गर्न सक्नुहुन्छ?
क्वार्ट्ज पोइन्टहरू कुनै पनि प्रकारको ध्यान वा उपचार ऊर्जा कार्य जस्तै रेकी, ध्वनि उपचार, सपनाको काम, अरोमाथेरापी, फूल सार थेरपी, र अधिकको साथ प्रयोग गर्न अद्भुत क्रिस्टलहरू हुन्। स्पष्ट क्वार्ट्ज क्रिस्टलले ऊर्जा र चिन्ताको विस्तार गर्दछ, साथै अन्य क्रिस्टलहरूको प्रभावलाई पनि। स्पष्ट क्वार्ट्ज क्रिस्टलहरू ऊर्जा एम्पलीफायरहरू हुन्।
क्वार्ट्ज ढु stone्गा वा क्रिस्टल हो?
क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तवमा खनिज हो, पृथ्वीको महाद्वीपीय क्रस्टको सबैभन्दा प्रचुर मात्रामा खनिज पदार्थमध्ये एक हो, सिलिकन र अक्सीजन मिलेर बनेको छ।
एक क्रिस्टल वा क्रिस्टल घन एक ठोस सामग्री हो जसका घटकहरू उच्च अर्डर गरिएको सूक्ष्म संरचनामा व्यवस्थित छन्, क्रिस्टल जाली बनाउँछ जुन सबै दिशामा विस्तार हुन्छ। यो कृत्रिम उदाहरण को लागी कृत्रिम हीरा को रूप मा सिर्जना गर्न सकिन्छ।
के रक क्रिस्टल महँगो छ?
रक क्रिस्टललाई महँगो रत्न मानिदैन। यो अक्सर चाँदीका गहनाका टुक्राहरूमा प्रयोग गरिन्छ र अधिक धेरै दुर्लभ रूपमा उच्च गहनाको कलामा भेटिन्छ (यदि यो केवल संरचनाको मुख्य भागहरूको लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ)।
तपाईं कसरी क्रिस्टल र गिलास ढु stone्गा बीचको भिन्नता भन्न सक्नुहुन्छ?
सामान्यतया, गिलासको किनारहरू सजिलै विच्छेद हुन्छन्, त्यसैले गिलासले पहिराहरूको किनारमा लगाउने देखाउँदछ, रत्नहरूमा आशा गरेभन्दा बढी।